चर्चित ह’त्या’रा चार्ल्स शोभराजबारे सर्वोच्चबाट आयो यस्तो आदेश, के होला अब ? — Imandarmedia.com
चर्चित ह’त्या’रा चार्ल्स शोभराजबारे सर्वोच्चबाट आयो यस्तो आदेश, के होला अब ?
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले चार्ल्स शोभराज गुरुमुखलाई थुनामा राखेकोबारेमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले,
उनलाई थुनामा राख्नुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। उनी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा छन्। उमेर र आधा सजाय कटाइसकेकाले आफूलाई छाड्नुपर्ने माग शोभराजको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिरियल किलरको उपाधि पाएका शोभराजले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ,
र कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई विपक्षी बनाई बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोभराजले १२ जनाको ह’त्या गरेको स्वीकार गरेका छन्।
तर उनले २० जनाभन्दा बढीको ह’त्या गरेको अनुमान छ। तेस्तै: सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका– १४ मड्यानमा श्रीमतीले दाउराको चिर्पटले टाउकोमा हान्दा गम्भीर घा’इते भएका श्रीमानको मृ’त्यु भएको छ।
घरायसी विवादका क्रममा गत मंगलबार अपराह्न श्रीमती ३७ वर्षीया हर्कमाया विश्वकर्माले चिर्पटले हान्दा अत्यधिक रक्तश्राव भई गम्भीर घा’इते भएका करिब ४० वर्षीय टेकबहादुर विश्वकर्माको बुधबार साँझ मृ’त्यु भएको हो।
घाइते विश्वकर्मालाई एक दिनपछि उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृ’त्यु भएको हो। श’व पोस्टमार्टमका लागि लहान ल्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरी निरीक्षक कैलाश खत्रीले जानकारी दिए।
एक छोरा, एक छोरी र श्रीमतीसहित चारजनाको परिवार गाउँमा मजदुरी गरेर बस्दै आएकाे थियाे। उनीहरूको झगडा हुनुको कारण नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। चि’र्प’ट प्र’हा’र गर्ने हर्कमायालाई प्र’हरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
तेस्तै, सिराहाको गोलबजार नगरपालिका– ६ दोहटियाका दलित युवक १९ वर्षीय रामकुमार सदामाथि छु’रा प्र’हा’र गरी ह’त्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पाँचजनालाई प’क्रा’उ गरेको छ।
प्रदेश प्र’हरी कार्यालय जनकपुरधाम र जिल्ला प्र’हरी कार्यालय सिराहाको संयुक्त टोलीले ह’त्या’प’छि फरार रहेका उनीहरूलाई प’क्रा’उ गरेको हो। प’क्रा’उ पर्नेमा गोलबजार नगरपालिका– २ का २२ वर्षीय भुवनप्रसाद महतो,
सोही नगरपालिका– ६ का १९ वर्षीय श्रवणकुमार मण्डल, २० वर्षीय कालु भन्ने रोहन विश्वकर्मा, १८ वर्षीय सोकात खान र १९ वर्षीय धर्मेन्द्र यादव रहेको जिल्ला प्र’हरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ।
प’क्रा’उ परेका पाँचजनाउपर क’र्त’व्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत सिराहाबाट पाँच दिनको म्याद लिई अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुभाष बुढाथोकीले बताए।
घटनामा संलग्न अन्यको पनि खोजीकार्य भइरहेको भन्दै प्रवक्ता बुढाथोकीले चाँडै प’क्रा’उ पर्ने बताए। गत शनिबार साँझ इँटाभट्टाबाट मजदुरी गरी गोलबजार हटिया भएर फर्किँदै गर्दा १९ वर्षीय रामकुमार,
सदा र १९ वर्षीय रिकेश सदामाथि छु’रा प्र’हार भएको थियो। उपचारको क्रममा रामकुमारको आरके मेडिसिटी अस्पतालमा मृ’त्यु भएको थियो भने अर्का ग’म्भी’र घाइते रिकेशको उपचार भइरहेको छ। दोषीलाई पक्राउ गर्न पीडित परिवार,
गोलबजारमा दुई दिन राजमार्ग अवरुद्ध गरी प्रदर्शनमा उत्रेका थिए। सर्वपक्षीय बैठकले दोषीलाई प’क्रा’उ गर्ने, क्षतिपूर्तिलगायतको व्यवस्था गर्ने सहमति भएपछि पीडित परिवारले श’व बुझेर मंगलबार अन्तिम संस्कार गरेका थिए।